Kanto, Teny Malagasy | rafozan-doza |
Published on 05/11,2008
Efa elaela izay, nanao tatitra kely aho momba ny teny malagasy avy amin'ilay boky nosoratan'i Mbola-Namana mitondra ny lohateny hoe: "Malagasy Mikabary Mitahiry ny Soatoavina". Mbola avy ao @ io boky io ihany, ao @ sapitra faharoa, no manazava ny kanto eo @ literatiora izay azo handrafetana ny kabary. Ohatra ny teknika be, sy mamonamonaina be, ny fanenon'ilay literatiora fa izay sombiny tena mahaliana no havoaka eto. (ndlr: copyright Mbola-Namana)
Marihana entoana fa tsy hoe lasa "gay" akory ity blaogy ity an. Mba hampisehoana mihintsy aza fa azo ampiasaina @ mahamety azy ny KANTO malagasy.
Ny KANTO dia izay manaitra, manintona, miavaka ary manendrika.
Voalohany @ izany mazava hoazy dia ny tononkalo. Misy ny manara-drafitra izay ahitana rima, figadona, andininy. Ao koa ny malala-drafitra, izay tsy misy an'ireo, tsy hifankahitana hoy ny tanora. Kanto ihany koa io, hoan'ny tena efa lasa lavitra @ tononkalo. Efa haintsika rehetra angamba izay fa apetrako ihany ilay ohatra 1: Kidaombaramita, kidaomita (coup de gueule kely hoan'le namana )
Koa dia arabaina ary andriamatoa
Nahazo ny namana akaiky indrindra.
Manomboka izao, ianareo tsy roa
Fa tokam-pisaina miara mamindra.
Ny sarin-teny: filazana zavatra tsy mivantana fa aseho amin-javatra hafa. Fanehoan-kevitra miolaka izany e.
Mioty voninkazo ilay voninkazo soa.
(Mba eritrereto kely ny effet-n'ny hoe: tsssssss tsssssst manao ahoana i Vonikazo )
Ny Tsilalaon-teny: filazan-javatra @ fanononana mitovitovy. Tsy voatery misy hevitra manokana fa natao hahafinaritra ny sofiny ihany.
Sambatra Raharefo, manan-kiefoefona
Sambatra Raherana, manan-kierana
Sambatra Razoro, manan-kijoroana.
(Ity angamba tsy azo ampiasana loatra fa sao mahazo an'le hoe t'as du style mais t'es debile )
Maniry izahay fa tsy manery; raha tsy manaiky anefa ianao, aoka tsy hanary
Ny Ohabolana: Efa haintsika rehetra hoe teny misy fananarana na fanoharana nataon'ny Ntaolo taloha. Milay be ilay ohatra ka avoakako ihany:
Aza manao tahaka ny njola mangata-bady, ny zanany no angatahina ka ny renininy no hatao tsara tily
Metonymie: fanovana anarana.
* Indray mihira -> mitovy taona (iray generation izany)
* Manano tena -> maty vady
* Matavin'ny ratsy ataony -> matavin'ny sakafo tsara sy betsaka azony avy @ ratsy ataony.
* Kely ray nahazo jiolahy, tano ity fa tratrako, vonjeo aho fa lasany -> iza no jiolahy eto? (ekena mba tsy hifandirana )
Metaphore: fanovana endrin-javatra. Misy ohatra roa nomeny, ka mba azavao kely hoe ny mampitovy azy ireo:
Ohatra 1: tantely amam-bahona ny fiainana
Ohatra 2: Ny olona voatra ampangoro, ka mifandimby ambony sy ambany
Parallelisme: Fehezan-teny roa na mihoatra mifanesy, na tsy mifanesy fa mitovy tsinjaran-toerana.
* sarin-teny mitovy hevitra lazaina mifanaraka
Ohatra: Vovonana iadian'ny lohany (@ lohan-trano no misy ny vovonana)
* mifanohitra lazaina miaraka
- Ianao no vato, mafy fa tsy afa-miteny
- Izaho atody, malemy fa mbola hanana elatra
( mitsiky hoazy ny feminista )
Misy eo @ 30 eo ho eo ilay lisitra fa ampy hankafizantsika ny teny malagasy angamba ireo. (tsy azoko ny sasany moa tsy mampiomehy ny sasany )
PS: Tratry ny fety daholo aloha izay efa neny rehetra eee
Posted by simplex at 23:00 Hametraka hevitra (13) ¦ Verindrohy (trackback) (0) ¦ Dago